Arsenal Oo Soo Saartay Liiska Seddexda Ciyaaryahan Ee Khadka Dhexe Ee Suuqa Ka Dooneyso
HomeWararka CiyaarahaArsenal oo soo saartay liiska seddexda ciyaaryahan ee khadka dhexe ee Suuqa ka dooneyso
January 11, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay diyaarisay liiska ka kooban khadka dhexe saddex nin oo ay ku jiraan Arthur , Denis Zakaria iyo Samuele Ricci .
Mikel Arteta ayaa la rumeysan yahay inuu doonayo inuu la soo wareego ciyaaryahan khadka dhexe ah bishaan suuqa kala iibsiga, maadaama Mohamed Elneny iyo Thomas Partey ay haatan ka ciyaarayaan Koobka Qaramada Afrika, halka Ainsley Maitland-Niles uu dhameystiray amaah uu ugu wareegay Roma.
Marka laga soo tago Arthur, Zakaria iyo Ricci, xiddiga Lyon ee Bruno Guimaraes ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Emirates, iyadoo maamulaha Gunners Edu uu aad ula dhacsan yahay Brazilian-ka, laakiin heshiiska Guimaraes ayaa u muuqda mid aad u adag bishaan sababtoo ah kooxda Lyon ayaa sare u qaaday qiimaha xidigan.
Sida laga soo xigtay saxafiga Fabrizio Romano , Juve ayaa dooneysa inay iska iibiso Arthur ka dib markii uu 66 milyan oo ginni uga soo dhaqaaqay Barcelona uusan u soconin qorshe, laakiin Arsenal ayaa sidoo kale bartilmaameedsaneysa Zakaria iyo Ricci.
Zakaria ayaa qayb muhiim ah ka ahaa ololaha Monchengladbach ilaa hadda, kaliya waxa uu ka maqnaa saddex kulan oo Bundesliga ah, halka Ricci uu wacdaro ka dhigay xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeeyay ee buuxa ee horyaalka Italy ee Empoli.
Arsenal ayaa wajihi doonta usbuuc weyn ka hor iyadoo lugta hore ee semi-finalka League Cup ay la ciyaari doonto Liverpool Khamiista, ka hor kulanka North London derby ee Axadda garoonka Tottenham Hotspur.